Tim Cook Anosheedzera Mimwe Mipiro Yokurwisa Covid-19 | Ndinobva mac
Tim Cook anozivisa mimwe mipiro yekurwisa Covid-19
Ehe, isu hatigone chero nguva kushora kubatana kweApple uye nemamwe makambani makuru ane chirwere ichi checoronavirus chiri kukanganisa nyika. Apple ine CEO wayo Tim Cook pamubhedha, vachangobva kuzivisa zvipo zvakawanda (kusvika parizvino madhora gumi nemashanu emadhora) kupfuura zvavakatoita muzuva ravo uye vanoratidza tsitsi yakakosha neItari, imwe yenyika dzakapwanywa chaiko neCovid-19. Hongu handidi kuti mazwi aya ashandurirwe zvisirizvo uye ndezvekuti pasi rese kurasikirwa kupi idambudziko, saka ndine rukudzo rukuru patinotaura nezvenyaya iyi.
Iyi ndiyo tweet nayo Tim Cook Akaenderera mberi achiratidza chikamu chake chese chinonyanya kutsigira nedenda.
Hazvina kumbove zvakakosha kuti titsigirane. Tiri kupa mupiro wakakura kusanganisira zvekurapa kuProtezione Civile muItari, kubatsira magamba ekutanga kupindura, vashandi vezvekurapa & vanozvipira vanoshanda vasinganeti kuchengetedza & kuponesa hupenyu. Vicini all'🇮🇹 ❤️
- Tim Cook (@iku_cook) March 19, 2020
Iyo kambani zvakare enzanisa nemipiro yese yevashandi Kutsigira COVID-19 yekuedza kuita munzvimbo, munyika, nepasi rese:
Kutsigirana hakuna kumbove kwakakosha zvakanyanya. Tiri kupa mupiro wakakura kusanganisira zvekurapa kuProtezione Civile muItari, kubatsira magamba ekutanga kupindura, Vashandi vezveMishonga uye vanozvipira vanoshanda vasinganeti kuchengetedza nekuponesa hupenyu. Tim anobika
Parizvino, rairo rakanakisa nderekuti isu tive nemutoro uye tigadzire kugara kwega kuitira kuti tisaparadzira hutachiona uhu huri kupararira nekumhanya kunoshamisa pasirese. Mazuva ano kupfuura nakare kose # QuédateEnCasa
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Tim Cook anozivisa mimwe mipiro yekurwisa Covid-19
Apple inogona kuvhura 12,9-inch iPad Pro ine mini LED skrini gare gare gore rino
Netflix neYouTube yekutanga kudzikisa mhando yevhidhiyo yezvirimo